Uma ayethanda kokuchitha isikhathi mahhala ezihlukahlukene amathoyizi ke, cishe, niyazi, ukuthi igama elithi "ukukopela". Ngalezi "amathuluzi" ungakwazi ukwenza izenzo ezihlukahlukene ezingase zingatholakali ngazo nabanye abadlali. Okwamanje, abasebenzisi eziningi ukusebenzisa ezinye yandiswe. Ngokuvamile, lezi zindlela ezingezansi emthethweni. Yiqiniso, amakhophi pirated zemidlalo zisebenzisa Izithako ezahlukene scary, kodwa uma usebenzisa Steam ke aphambe kungaholela kona kuletha imiphumela emibi.
Namuhla sizoxoxa ngendlela kulokhu kunjalo "CS: GO". Uma usebenzisa aphambe ezivamile ungathola for free ke ekugcineni ungakwazi incur Vac-ban. Empeleni, kwenzeka kaningi impela. Ukuletha umdlalo njengoba azikho aphambe yangasese, okuyilokho, eqinisweni, ingasetshenziswa, kodwa kuyingozi kakhulu. Namuhla sinqume ukukunika zemibuzo evamile mayelana nendlela ukususa HAC-uvinjelwe "CS: GO". Uma ngabe uthole le imvume ngeshwa akufanele bayodumazeka kanye futhi wabeka izandla zakhe, njengoba kukhona manje yisikhathi futhi izindlela zokusebenza ngempela ekuxazululeni le nkinga.
Yiqiniso, ngaphambi kokuba uthole "ngaphandle", abadlali hhayi abaningi ukucabanga ngemiphumela etholwa kungenzeka. Kodwa namanje, uma kwenzeka isenzakalo esinjalo futhi ufuna ukuqhubeka ukuqhubeka ukubamba iqhaza kule phrojekthi ethandwa, kumelwe ukuthola isixazululo umbuzo kanjani ukususa HAC-uvinjelwe "CS: GO" ( "Umusi"). Ngokuvamile, lezi unswinyo kungukuthi isuswe, kodwa namanje uma ufuna ukuya khona emuva umdlalo, kufanele ukuhlola indlela echazwe. Ngakho, ake uqhubekela isixazululo ezinkingeni zethu (indlela ukususa HAC-uvinjelwe "CS: GO"). Ngokushesha kufanele kuphawulwe ukuthi indlela ngenhla abakwazi ukunikeza into eqinisekile, kodwa namanje abadlali abaningi abaye esetshenziswa ngaphambi, namanje bayabonga abantu bakwazi ukuthola isisombululo zokusebenza. Ngisho noma unquma ukusebenzisa indlela ngenhla, iyiphi imiphumela emibi ngeke kuhilelani. Uma wenza kanjalo, cabangela omunye isixazululo inketho umbuzo kanjani ukususa HAC-uvinjelwe "CS: GO" ku-console, siyakukhuthaza ukuba ukuthumela imilayezo yakho ekusekeleni lakala ezahlukene kanye qiniseka ukushintsha ikhodi yomthombo. Kuyasiza ukuzama ukubhala ngezilimi ezihlukahlukene futhi musa ukukopisha izicelo ekhona kakade. Kulokhu, uba nethuba ukuthi ithimba ukwesekwa ngizoya kuwe umhlangano.
Okulandelayo isixazululo eyinhloko lenkinga kanjani ukususa HAC-uvinjelwe "CS: GO". Into yokuqala udinga ukuya kwi Steam ikhasi support bese ubhalisa i-akhawunti entsha. Kunconywa ukuthi ngeke ngibhale ngesiRashiya bese ngesiNgisi. Khona-ke kuyodingeka ukuthi uvule isihloko esisha nesigaba zibonisa uhlobo "yokuvala Vac». Ngokulandelayo, uchaze inkinga yakho futhi wazise abaphathi ukuthi ukuhlukumeza imithetho inkonzo kwakuyiphutha futhi ngeke kwenzeke futhi. Lena indlela kuphela enikeza ithuba nodaba kanjani ukususa HAC-uvinjelwe "CS: GO". Siyabonga ngokunaka kwakho.
Izinsiza ezingavamile Warframe umdlalo. Gallium nezindlela ukukhiqizwa yayo
Indlela yokwenza banebhentshi ku "Maynkraft" futhi yini ingasetshenziswa?
Uhlu ewusizo izincwadi izingane eminyakeni 5-6
Izinkukhu tetra: incazelo yezohlobo, izici nokubuyekeza
Indlela knock out izinto kule Puja ( "Dota 2")?